Agab Deeq ah Oo Lagaadhsiiyay Gobolka Sitti - Cakaara News
Agab Deeq ah Oo Lagaadhsiiyay Gobolka Sitti
Shiniile(CN) Axad, 15ka Nov 2015, Xafiiska kahortaga iyo udiyaargarawga masiibooyinka DDSI ayaa gaadhsiiyay agab deeq ah oo isugu jira maacuun ku filan qoysas ay tiradoodu gaadhayso 1,500 oo qoys. Deeqdan ayaa ah mid loo qaybinayay bulshada ay abaartu saamaysay ee ku dhaqan degmooyinka gobolka sitti.
Hadaba wasiirka xafiiska kahortaga iyo Udiyaargarawga masiibooyinka DDSI mudane Maxamed Daahir oo u waramay shabakada cakaaranews ayaa sheegay inay tani kamid tahay dadaalada ay xukuumadu wado ee kuwajahan maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah. waxaa kale uu wasiirku sheegay in deeqdan oo kale uu xafiisku gaadhsiiyay gooba kale oo agagaarka wabiga shabeele ah oo ay daadad saameeyeen.
Gabagabadii xafiiskan ayaa ah mid utaagan inuu ka jawaabo mar walba ka hortaga masiibooyinka dabiiciga ah ee yimaada xiliyada abaaraha, daadadka isagoo lakaashanaya hay’adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn ee ay bahwadaagta yihiin.